एम्बुलेन्स सेवा कसको लागि ? – Nepal Reports
वर्तमान अवस्थामा सर्वसाधारणले धान्न नै नसक्ने गरी मनलाग्दो अवस्थामा एम्बुलेन्स दर तोकिएको छ , जुनले न्यून आयभएकाहरुलाई ठूलो भार भार परेको छ । एक त भनेको बेलामा एम्बुलेन्स सुविधा छैन अको भने चर्को भाडा !!
अहिले हामी कोरोना महामारी जस्तो विषम परिस्थितिमा छौँ। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनु , ज्यान गुमाउनु एकातिर छ भने अन्य दुर्घटना बाट घाइते हुने र ज्यान गुमाउनु अर्कोतिर छ । देशमा सबैले विगत ६ महिना देखि मानिसहरू विस्थापित भएका, रोगी, सुत्केरी, दुर्घटना इत्यादी साथसाथै मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गरेका आदि समाचारहरु हरेक दिन हेर्दै बस्न परेको छ।
आपतकालिन अवस्थामा जुनसुकै रोगका बिरामीलाई पनि जतिसक्दो छिटो समयमा अस्पताल पुर्याउनलाई नै एम्बुलेन्सको मुख्य दायित्व हो। चाहे त्यो गरिब होस या धनि जीवन सबैका लागि अमुल्य छ । रोगले धनि गरिब कोहि भन्दैन । इमर्जेन्सी अवस्थामा जोकोहि लाई पनि एम्बुलेन्सको जरूरत पर्दछ । तर आजको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने एम्बुलेन्स व्यक्तिगत प्रयोजनमा आइरहेका लाजमर्दो र दुःखलाग्दो खबरहरु सुन्न परेको छ । आफ्ना आफन्तलाई ओसारपसार गर्ने देखी लिएर अवैधानिक रुपमा लागूऔषधका साथै मुल्यवान काठहरू तस्करीका घटनामा मुशिदै एमबुलेन्सले आफ्नो कर्तव्यको दुरुपयोग गरेको छ ।
के एम्बुलेन्सको आवश्यक पर्ने आपतकालिन अवस्थाहरू यिनै हुन् त ??
सामाजिक दायित्व वा जिम्मेवारी वहन यही हो त ?
यस महामारी अगाडि १०२ मा सम्पर्क गर्ने बित्तिकै सुलभ र सस्तो रुपमा एम्बुलेन्सको सुविधा पाइन्थ्यो । तर वर्तमान अवस्थामा सर्वसाधारणले धान्न नै नसक्ने गरी मनलाग्दो अवस्थामा एम्बुलेन्स दर तोकिएको छ , जुनले न्यून आयभएकाहरुलाई ठूलो भार भार परेको छ । एक त भनेको बेलामा एम्बुलेन्स सुविधा छैन अको भने चर्को भाडा !!
के यसैलाई न्याय मान्ने?
के यो सब कोरोनाकै डर ले मात्रै हो त ?
यस्तो अवस्था कहिले सम्म ?
बिरामी ओसारपसार गर्ने निकायले यो कार्य गर्नको मुख्य रहस्य के त ?
न्यून आय भएका व्यक्तिका वेदना कस्ले सुन्ने ?
एम्बुलेन्सकै ढिलाईले धेरै व्यक्तिहरू ले मानवीय क्षति भोग्नुपरिसकेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ??
यस परिस्थिति बारे छिटो भन्दा छिटो निर्णय होस । जनता यस्तो सहेर धेरै बस्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
- कोपिला ढुंगाना